Usoro kachasị mma maka Okwu | Akụkọ akụrụngwa
N'agbanyeghị ụzọ dị iche iche anyị nwere dị n'ahịa mgbe ị na-ede akwụkwọ ederede, na -emepụta mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ihe ngosi, ihe ngwọta nke Office na-enye anyị mgbe niile bụ ihe a kacha eji, ya mere, ihe kachasị mma dị na ahịa, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'efu.
N’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri anọ n’ahịa, Okwu aghọwo ihe nke aka ya ihe nhazi okwu kacha mma, ihe nhazi okwu nke n’enye anyi otutu oru, otutu n’ime ha amaghi oru ma nke ahu nwere ike inyere anyi aka ime ka oru anyi bawanye kwa ubochi.
Ọnụ ọgụgụ nke ọrụ na ohere nke Okwu na-enye anyị na-egbo mkpa nke ndị ọrụ niile, gụnyere ọkachamara kachasị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ụfọdụ ọrụ Okwu a na-enye anyị, a na m akpọku gị ka ị gaa n’ihu n’ịgụ ihe, ebe ị ga-achọpụta ọrụ ị maghị na ị nwere ike iji Microsoft Word rụọ ọrụ.
1 Chọọ ma dochie okwu
2 Nkọwa okwu
3 Chọọ okwu na ịntanetị
4 Tugharia dọkụmentị, paragraf, ma ọ bụ ahịrị
5 Mepụta ederede ederede
6 Naghachi faịlụ a na-azoputaghi
7 Chedo a akwụkwọ na paswọọdụ
8 Tinye akara mmiri
9 Chekwa na usoro PDF
10 Mepụta akwụkwọ mmado
11 Tinye udi ka ederede
Chọọ ma dochie okwu
Mgbe anyị rụchara ọrụ, o yikarịrị ka anyị nyochachara ya, anyị edepụtaghị otu okwu, okwu nke anyị chere na anyị edeghị ede ruo mgbe anyị lere ya na mpụga nke akwụkwọ ọkọwa okwu Okwu. N'okwu ndị a, ọkachasị mgbe akwụkwọ ahụ buru oke ibu, Okwu na-enye anyị ohere ọ bụghị naanị ịchọ okwu ahụ iji gbanwee ya, kamakwa na-enye anyị ohere dochie ya na akpaghị aka maka nke ziri ezi.
Ọrụ a dị na igbe ọchụchọ dị na akuku aka nri nke ngwa.
Na mgbakwunye ịgụnye otu nke kachasị mmapụta okwu na asụsụ ụtọ anyị nwere ike ịchọta taa na ngwa ọ bụla, dịka ezigbo nhazi okwu bara uru nnu ya, kwa webatara a ọkọwa okwu nke synonyms, akwụkwọ ọkọwa okwu na-enye anyị ohere iji dochie okwu ahọpụtara na synonym nke dabara na ederede.
Iji banye na Nkọwa okwuNaanị anyị ga-ahọrọ okwu ahụ wee pịa bọtịnụ nri aka nri ma debe òké ahụ na nhọrọ Synonyms, nhọrọ nke ga-egosipụta ndepụta na okwu ndị yiri ya na okwu anyị na-achọ.
Chọọ okwu na ịntanetị
Mgbe anyị na-ede akwụkwọ ma anyị ejighị n'aka ma okwu anyị jiri mee ihe ziri ezi, ihe ọ na-eme bụ ịtụba ihe nchọgharị nke ndị otu anyị kwesịrị ijide n'aka. Ọ dabara nke ọma, Microsoft echewo nke ahụ ma nye anyị a onye na-achota intaneti na ngwa n'onwe ya. A na-akpọ atụmatụ a Smart Search.
Iji jiri ọrụ a, anyị ga-ahọrọ mkpụrụ okwu a na-ekwu, pịa bọtịnụ ziri ezi wee họrọ Smart Search. N'oge ahụ, a ga-egosipụta ya n'akụkụ aka nri nke ngwa ahụ, Nsonaazụ ọchụchọ na Bing nke okwu ahụ, ka anyị nwee ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na edepụtara ya nke ọma, ọ bụrụ na ọ bụ okwu anyị na-achọ ma ọ bụ na anyị ga-anọgide na-ele anya.
Tugharia dọkụmentị, paragraf, ma ọ bụ ahịrị
Ọ bụrụ na, n’ihi ọrụ gị, ihe omume gị ma ọ bụ ọmụmụ ihe gị, a na-amanye gị ịkpọ ma ọ bụ dee akwụkwọ n’asụsụ ndị ọzọ, Microsoft na-enye anyị onye ntụgharị okwu, onye ntụgharị ntụgharị nke na-ahụ maka ịsụgharị akwụkwọ ahụ niile ma ọ bụ naanị ederede anyị nwere ahọpụtara Onye ntụgharị okwu a sitere na Microsoft na o nweghi ihe jikọrọ ya na nke Google.
Ọ bụrụ na ederede anyị chọrọ ịtụgharị, adighi etinye okwu nkowa, nsụgharị ahụ ga-abụ nke zuru oke ma nwee nghọta. Onye ọrụ ntụgharị a na - enye anyị ihe dịka nsonaazụ Google.
Mepụta ederede ederede
Mgbe a manyere anyị ide ederede iji mejupụta oghere dị na akwụkwọ, mpempe akwụkwọ mgbasa ozi ma ọ bụ ụdị faịlụ ọ bụla, anyị nwere ike ịmalite idetuo na ịdefe ederede site na akwụkwọ ndị ọzọ. Okwu na-enye anyị ihe ngwọta dị mfe maka obere nsogbu a. Ide ihe = rand (nọmba nke paragraf, ọnụọgụ nke ahịrịokwu), Okwu ga-egosi anyị ọnụọgụ nke paragraf ndị edoziri edepụtara.
Ederede na-egosi anyị, ọ bụghị n'ezie aghara, ihe ị na-eme bụ ugboro ugboro ederede ederede anyị nwere ike ịchọta na font anyị ji na akwụkwọ anyị na-eme.
Naghachi faịlụ a na-azoputaghi
O doro anya na ihe karịrị otu oge, ị hụla otú kọmputa gị si mechie n'ụzọ na-atụghị anya ya, ike apụla, ị ga-apụ na batrị ... ma ọ bụ maka ihe ọ bụla ọzọ, ị kpachapụghị anya ichekwa akwụkwọ ahụ. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka nsogbu na-enweghị isi, ọ bụ karịa karịa ka ị nwere ike. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị, na maka ọtụtụ nsụgharị, anyị nwere ohere weghachite akwukwo ederede nke anyi na-azoputaghi.
Chedo a akwụkwọ na paswọọdụ
Ọ bụrụ naanị na anyị ejiri akụrụngwa anyị, wee chekwaa ya na paswọọdụ naanị anyị maara, ọ dịghị mkpa ichedo akwụkwọ ndị anyị achọghị ka ndị ọzọ hụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ isoro ndị mmadụ kerịta dọkụmentị ahụ, na-enweghị ndị enyemaka etiti ọnụ nwere nnweta, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ chebe ya na paswọọdụ. NDipMỌD:: ezigala uzo okwuntughe tinyere faịlụ.
Iji kpuchido dọkụmentị, anyị ga-pịa na menu menu Ngwaọrụ yana Chebe dọkụmentị. Okwu ọ ga-ajụ anyị abụọ okwuntughe, imeghe akwukwo na idezi ya. Okwuntughe a aghaghi inwe otu ihe abuo, ebe obu na obughi ndi nile natara otu akwukwo ahu gha acho ide ya.
Tinye akara mmiri
Ọ bụrụ na akwụkwọ anyị na-eke nwere ebumnuche azụmahịa, iji zere iji oghere dị na n'okpuru nkụnye eji isi mee ebe data anyị, anyị nwere ike tinye a watermark aghụghọ na ndabere, akara ngosi mmiri nke nwere ike ịbụ ma na ederede ederede na ụdị ihe oyiyi. O doro anya, ọ bụrụ na anyị achọghị ka ewepụ ya, mgbe anyị na-ekekọrịta akwụkwọ ahụ, anyị ga-eme ya n'ụdị na-abụghị Okwu, dịka ọmụmaatụ PDF, ma ọ bụ kpuchido dọkụmentị ka onye ọ bụla ghara idezi ya.
Chekwa na usoro PDF
Dị nnọọ ka Okwu ghọrọ ọkọlọtọ na ụlọ ọrụ kọmputa, usoro PDF (Adobe) dịkwa. N'ihi nke a, Okwu na-enye anyị ohere ịchekwa faịlị n'ụdị PDF, ezigbo usoro iji kesaa dọkụmentị nke anyị achọghị ka onye depụtara dezie ya. Nke a na nhọrọ a hụrụ n'ime Save dị ka nhọrọ na ịpị ndọpụta nke formats na ọ na-enye anyị.
Mepụta akwụkwọ mmado
Otu oru pere mpe nke Okwu bu ihe puru ime mepụta akwụkwọ mmado maka ọrụ Okwu nka, otu n'ime ihe ndị kacha ochie na ngwa a na nke ejiri ọtụtụ oge na 90s iji mepụta akwụkwọ mmado. Ọrụ a na-enye anyị ohere ide ederede ma nye ya ọdịdị na agba anyị chọrọ.
Tinye udi ka ederede
A ọrụ metụtara graphic ohere na Okwu Art na-enye anyị, bụ ekwe omume nke na-agbakwunye ọgụgụ, ma igbe ederede, akuku uzo, obi, okirikiri, ọdịdị geometric… A na-etinye ihe oyiyi ndị a dị ka a ga - asị na ha bụ onyogho, ya mere a na - emeso ha otu ihe ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Aplicaciones » Usoro kachasị mma maka Okwu
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na-abịa iPhone na ekwentị gam akporo gị, otu esi rụọ ọrụ ya
Falsegha coronavirus njikere site na ekwentị 632282524